All Posts Tagged Tag: ‘Articles’
Posted by: admin Posted on: Jul 21 2016 Posted in: ဆောင်းပါးများ
ရဟန်းတော်များသည် မိုးလေးလရှိသည့်အနက် ရှေ့ပိုင်းသုံးလတွင်မိမိအဆင်သင့်ရာ ကျောင်းတိုက်၌ စွဲမြဲစွာနေထိုင်ကြရသည်။ ယင်းကို ဝါကပ်သည် ဝါဆိုသည်ဟုပြောကြ၏။ စင်စစ်မှာ ကိုယ်နေထိုင်ရာကျောင်း၌သာ ညအိပ်ညနေ အပြင်မသွားဘဲ စွဲမြဲစွာနေထိုင်ခြင်းဖြစ်၏။ အကယ်၍ ညအိပ်ညနေ အပြင်သွားရန်ရှိပါက ခွင့်ပန်၍သွားနိုင်သည်။ ၎င်းကို ဝါပန်သည်ဟု ပြောလေ့ရှိ၏။ ဝါကိုလည်း အကြောင်းမဲ့ပန်၍မရ၊ အကြောင်းရှိမှ ပန်လို့ရ၏။ (ဒါတုံ သောတုံ ပသိတုံ) တုံသုံးချက် တစ်ချက်ချက်မိမှ ပန်လို့ရ၏။ တုံသုံးချက်ဆိုသည်မှာ (၁) အလှူဒါနပြုလို၍ ပင့်ဖိတ်လျှင်ဖြစ်စေ (၂) တရားပွဲပင့်လျှင်ဖြစ်စေ (၃) ရဟန်းသံဃာတို့အား ဖူးမြော်ချင်၍ပင့်လျှင်ဖြစ်စေ ထို (တုံ)သုံးချက် တစ်ချက်ချက်မိမှ ဝါပန်၍သွားနိုင်၏။ သို့သော် (၇)ရက်ထက်မကျော်ရ၊ (၇)ရက်အတွင်း မိမိဝါဆိုရာကျောင်းသို့ ပြန်လာရသည်။ (၇)ရက်ထက်ကျော်အောင် အပြင်၌ ညအိပ်ညနေ နေမိပါက ဝါကျိုးသည် ဝါပြတ်သည်ဟု ပြောလေ့ရှိ၏။ ဝါကျိုး ဝါပြတ်သောရဟန်းသည် ကထိန်ခံခွင့် သံဃိကဝေစုခံယူခွင့်များ ဆုံးရှုံးရ၏။ […]
ခန္ဓာဘက် ဉာဏ်လှည့်ရမယ်။ အိမ်မှာနေကြတော့ အပြင်ဘက်သာလှည့်နေတယ်၊ ခန္ဓာဘက်လှည့်တယ်ဆိုတာ မပါဘူး။ လှည့်ပြန်တော့လည်း ဒီခန္ဓာကြီးကို အနိစ္စဘက် ဒုက္ခဘက် အနတ္တဘက်မှည့်ဘဲနဲ့ ရုပ်ဟာ ငါပဲ သူပဲ ဝေဒနာလည်း ငါပဲ စိတ်လည်းငါပဲဆိုပြီး ဒိဋ္ဌိနဲ့ချည်းလှည့်နေတယ်။ ဉာဏ်နဲ့လှည့်တယ်လို့ မရှိဘူး။ ဒိဋ္ဌိနဲ့ခန္ဓာလှည့်နေကြတာ။ အိမ်မှာနေတဲ့အခါ ဒါဘယ်သူ့ဖို့တုံး- ငါ့ဖို့၊ ဘာကြောင့်ရှာနေတာတုံး- ငါစားဖို့ ငါဝတ်ဖို့ဆိုတော့ ဒိဋ္ဌိနဲ့ ခန္ဓာလှည့်နေတာ။ တစ်ခါတလေကျတော့ တဏှာနဲ့ ခန္ဓာလှည့်နေတာ။ ငါ့သား ငါ့သမီးဖို့ ရှာနေရတယ်ဆိုတာ တဏှာနဲ့ခန္ဓာလှည့်နေတာ။ ခန္ဓာပေါ် ဘာလှည့်နေကြသလဲဆိုရင် ဒိဋ္ဌိနဲ့တစ်ခါလှည့်လိုက် တဏှာနဲ့ တစ်ခါလှည့်လိုက်။ ဒိဋ္ဌိနဲ့လှည့်ပြန်တော့လည်း ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်က ဆက်ပြန်တယ်။ တဏှာနဲ့လှည့်တော့လည်း ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်က ဆက်ပြန်တယ်။ ဈေးထွက် ပွဲရုံထိုင် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလုပ်နေကြတယ်ဆိုပေမယ့် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရှာနေ စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူကလည်း ငါ့ဖို့ ငါ့သားဖို့ ငါ့သမီးဖို့ပါပဲ။ အသေးစားစီးပွားရေး တစ်ပိုင်တစ်နိုင်စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူကလည်း ငါ့ဖို့ ငါ့သားဖို့ […]
ဒေါက်တာအရှင်ပါရမီ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက တန်ခိုးတော်နဲ့ ရဟန်းတွေကို ငရဲပြည်ခေါ်သွားပြီး မဟာပရိဠာဟငရဲကို ပြတော်မူပါတယ်။ ငရဲမီးတဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်နေတဲ့ မဟာပရ်ိဠာဟငရဲကိုပြပြီး “ရဟန်းတို့ မဟာပရိဠာဟငရဲဟာ ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ မျက်စိနဲ့ ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် မြင်တာနဲ့ မျက်စိပျက်တယ်၊ ငရဲသားတွေ ပူလွန်းလို့အော်ကြတဲ့အသံတွေကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း ကြားတာနဲ့ အဲဒီနား ပျက်တယ်။ ငရဲမီးနဲ့ လောင်မြိုက်လို့ထွက်လာတဲ့အညှော်နံ့တွေကို နံလိုက်ရင်လည်း အဲဒီနှာခေါင်း ပျက်တယ်။ အဲဒီငရဲမီးနဲ့ လျှာနဲ့ထိလိုက်ရင်လည်း အဲဒီလျှာ ပျက်တယ်။ ကိုယ်နဲ့ထိရင် ကိုယ်ပျက်တယ်။ ဒီလောက်အထိ ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီထက်ကြီးတဲ့ ကြောက်စရာရှိသေးတယ်။ အဲဒါ သစ္စာမသိတာပဲ။ သစ္စာမသိတဲ့ဒုက္ခက ဒီထက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်”တဲ့။ သစ္စာမသိခြင်းကြောင့် ဒီငရဲတွေ ကျရောက်ရတာ။ သစ္စာသိရင် ကျစရာ မရှိပါဘူး။ ငရဲကျရတာလည်း သစ္စာမသိလို့။ လူဖြစ်ရတာကလည်း သစ္စာမသိလို့။ နတ်ဖြစ်ရတာကလည်း သစ္စာမသိလို့။ ဒါကြောင့် သစ္စာမသိခြင်းဟာ ကြောကစရာအကောင်းဆုံးပဲလို့ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက မိန့်တော်မူပါတယ်။ ဇာတိဖြစ်ကြောင်းကံတွေလုပ်နေကြတာဟာလည်း သစ္စာမသိလို့ပါပဲ။ […]
ဒေါက်တာအရှင်ပါရမီ ၀ိပဿနာဆိုတာ သာသနာတွင်းတရား။ သို့သော် ကလျာဏမိတ္တ- ဆရာကောင်းသမားကောင်း ပေါင်းမိမှလည်း တွေ့နိုင်ပြန်တယ်။ ဆရာကောင်းဆိုတာကလည်း ၀ိပဿနာမလုပ်မီ ဒိဋ္ဌိခွာပေးနိုင်မှ ဆရာကောင်းလို့ မှတ်ရမယ်။ ဒိဋ္ဌိမကွာတဲ့ ၀ိပဿနာဟာ အားနဲတဲ့ဝိပဿနာ- ဒုဗ္ဗလ၀ိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။ ဒိဋ္ဌိကွာအောင် ရှင်းလင်းသင်ပြပေးပြီးမှသာ အားထုတ်လိုက်ရင် ဒိဋ္ဌိ အသိနဲ့ကွာနေပြီဖြစ်လို့ ကိုယ်အားထုတ်တဲ့ ၀ိပဿနာဟာ အားကောင်းတဲ့ ၀ိပဿနာ- ဗလ၀၀ိပဿနာဖြစ်တယ်။ အားနဲတဲ့ဝိပဿနာက ကုသိုလ်တော့ ရပါတယ်။ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်တော့ မရဘူး။ ဒီတော့လဲ အားထုတ်ရပြီး အချိန်ကုန်ရကျိုးမနပ်၊ သာသနာနဲ့တွေ့ရကျိုးမနပ်ဖြစ်ရတတ်တယ်။ ဒါ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရသလဲဆိုတော့ ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့ အားထုတ်မိတဲ့အတွက်ပဲ။ အားကောင်းတဲ့ဝိပဿနာကတော့ ကုသိုလ်လည်း ရတယ်၊ တကယ် ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ အားထုတ်ရင် မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်လည်း ရနိုင်တယ်၊ နိဗ္ဗာန်လည်း ရနိုင်တယ်။ ၀ိပဿနာကတော့ ခန္ဓာထဲမှာ ရှုတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒိဋ္ဌိမကွာလို့ရှိရင်လည်း မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်မရနိုင်ဘူး။ […]
Dr. Ashin Parami (Lecturer, ITBMU) Different kinds of feelings we experience are covered by the term “vadana” in Pali, which isamental factor,“cetasika.”Vedana isakind of mental state that feels the object.Consciousness, we call it “citta,” only experiences its object; it does not feel. Vedana, however, has the function of feeling: sometimes pleasant,sometimes unpleasant. When we do […]
ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ဂဇင်္ဂလနိဂုံး သုဝေဠုတော၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူစဉ်က ပါယာသိဝိယပုဏ္ဏားကြီး၏ တပည့် ဥတ္တရလုလင်သည် ဘုရားရှင်ထံ လာရောက်ဖူးတွေ့တယ်။ ဘုရားရှင်က သင့်ဆရာပါယာသိက ဣနြေ္ဒတွေလုံအောင်ထိန်းနည်းတွေ ဟောပါသလားလို့မေးတယ်။ မေးတော့ “ဟောပါတယ်ဘုရား”။ “ဘယ်လိုများဟောလဲ”။ “မှန်လှပါ၊ မျက်စိက ဘာမှမမြင်အောင် ပိတ်ထား၊ နားက ဘာမှမကြားအောင် ပိတ်ထား၊ ဒါဆို ဣနြေ္ဒလုံခြုံတာပဲ”လို့ ဟောပါတယ်ဘုရားတဲ့။ ဒီတော့ ဘုရားရှင်က “ဥတ္တရ၊ မင်းဆရာကြီးဟောသလိုဆိုရင် အမိဝမ်းတွင်းက မျက်စိကန်းလာတဲ့သူတွေ၊ နားပင်းလာတဲ့သူတွေ ဣနြေ္ဒလုံခြုံသောကြောင့် နိဗ္ဗာန်မဂ်ဖိုလ် ရောက်ကြမှာပေါ့”ဟု မိန့်တော်မူလိုက်ရာ ဥတ္တရလည်း ခေါင်းငိုက်စိုက်ကျကာ ဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်ဖြစ်နေပါသတဲ့။ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက အရှင်အာနန္ဒာကိုခေါ်တော်မူပြီး ရဟန်းတွေကို အစုခိုင်းကာ တရားသဘင်ကိုစတင်လိုက်ပါတယ်။ ဣနြေ္ဒလုံခြုံအောင်စောင့်စည်းရာမှာ ပါယာသိနည်းကတစ်နည်း၊ အရိယာတို့ရဲ့နည်းက တစ်နည်းဟုမိန့်တော်မူလိုက်ရာ အရှင်အာနန္ဒာက အရိယာတို့ရဲ့ ဣနြေ္ဒလုံခြုံအောင် စောင့်နည်းကို မိန့်တော်မူပါလို့ တောင်းပန်သဖြင့် ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူလိုက်ပါတယ်။ ဥပမာ- ခင်မင်သူ၊ မုန်းသူ၊ […]
ဖြစ်ရပ်က ဘဒ္ဒကမ္ဘာမှာ ပွင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ တတိယမြောက်ဘုရား၊ ကဿပဘုရားသာသနာကွယ်လုလုအချိန်ကာလက ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါ။ ထိုစဉ်က ဗာရာဏသီပြည် ဥသီနကမင်းကြီး မင်းပြုနေစဉ်ပေါ့။ ရဟန်းတွေကလည်း ၀ိနည်းပျက်နေကြတယ်။ အနေသန- မလျှော်ကန်တဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေနဲ့ ၀မ်းစာရှာစားနေကြတယ်။ ရဟန်းတရားမလုပ်ဘဲ ရဟန်းမတရားတွေ လုပ်နေကြတယ်။ တရားချိုချိုလေးတွေ တိုက်ကျွေးဖို့တော့ ဝေလာဝေး၊ ဟိုအော် ဒီဆဲနဲ့ ဒေါသတွေနဲ့သာ အသားကျနေကြသတဲ့။ ချိုသာတဲ့တရားတွေ ဟောရမယ့်ပါးစပ်က နတ်ကောင်းမကပ်တော့ဘူးလေ။ နတ်ဆိုးပူးနေသလား ထင်ရအောင် မကြားဝံ့မနာသာစကားတွေနဲ့ ကလော်ဆဲနေပြန်တော့လဲ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ စရိုက်အတုလိုက်နေရတဲ့ လူသားတွေမှာလည်း အဆဲသာ တတ်နေကြတော့တာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ လူတွေနဲ့ သောကော ရောဂေါ ၀ိနဿတု ဆိုသလိုပါပဲ။ ရဟန်းတွေက လူနဲ့ရော၊ လူအလုပ်သာလုပ်နေကြသတဲ့။ ဒါနဲ့ လူလိုနေကြဆိုပဲ။ ကလေးတွေဘာတွေနဲ့ပေါ့လေ။ ခေတ်မီတယ်ပြောရမလားပဲ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းက ကလေးငိုသံ တေးဆိုချော့သိပ်သံက တေးသံသာ ချိုမြမြ။ အုန်းမောင်း ကုလားတက်တို့ […]